चयन रूपरेखा स्तरका लागि ढाँचा निश्चित गर्नुहोस्.
चयन गरिएको रूपरेखा तहमा तपाईँंले लागू गर्न चाहेको क्रमाङ्कन शैली चयन गर्नुहोस्।
रोमन अंकहरू (माथिल्लो)
रोमन अंकहरू (तल्लो)
उस्तै ठूला अक्षरहरू सहितको वर्णात्मक क्रमाङ्कन, जहाँ अक्षरहरूको सङ्ख्याले अध्याय स्तर सूचीत गर्दछ. उदाहरणका लागि, स्तर तीनको दोस्रो सङ्ख्या "BBB" हो.
उस्तै तल्लो केस अक्षरहरू सहितको वर्णात्मक क्रमाङ्कन, जहाँ अक्षरहरूको सङ्ख्याले अध्याय स्तर सूचीत गर्दछ. उदाहरणका लागि, स्तर दुइको तेस्रो सङ्ख्या "cc" हो.
क्रमाङ्कन प्रतीक छैन. विभाजक फाँटहरूमा परिभाषित क्यारेक्टर वा प्रतीक मात्र क्रमांकित लाइनको सुरुमा देखा पर्दछ.
क्रमाङ्कन क्यारेक्टरका लागि ढाँचा चयन गर्नुहोस्.
अध्याय क्रमाङ्कन भित्र सम्मिलित गर्नलाई रूपरेखा तहहरूको सङ्ख्या चयन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, अध्याय क्रमाङ्कन: १.१.१ को तिन तहहरू प्रदर्शन गर्नलाई "३" चयन गर्नुहोस्।
तपाईँंले अध्याय सङ्ख्या पहिले प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ प्रविष्टी गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, "अध्याय १" प्रदर्शन गर्नलाई "अध्याय " टाइप गर्नुहोस्।
तपाईँंले अध्याय सङ्ख्या पछि प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ प्रविष्टी गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, "१." प्रदर्शन गर्नलाई (.) टाइप गर्नुहोस्।
यसमा सुरु गर्नुहोस्
सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँं अध्याय क्रमाङ्कन फेरि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ.
Title is: क्रमाङ्कन